Manni maree ministirootaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa labseera - BBC News Afaan Oromoo
Manni maree Ministirootaa Itoophiyaa walgahii ariifachiisaa har'a taa'een, heera biyyattii balaarraa oolchuuf labsii yeroo muddamaa labsuusaa ibseera.
Akka ibsa midiyaa mootummaa kan ta'e EBCn darbetti, labsichi nageenyaa fi walqixxummaa lammiilee kabachiisuuf akkasumas lammiileen nagaan akka socha'aniifi bakka fedhan akka jiraatan yaadameeti.
Haaluma kanaanis ibsichi dabalee, yeroo dhiyoon asitti gochaawwan heera mootummaa fi sirnicha balaaf saaxilan akkasumas duudhaa waliin jireenyaa kan faalleessan raawwatamaa turuusaanii caqaseera. Akkasumas gochaawwan sochiilee hojii damee dhunfaa kan gufachiisu, olaantummaa seeraa kan dadhabsiisuufi faallaa isaa jeequmsa humnootaan deegaramee fi seeramaleessummaa kan babal'isuu ta'ulleen eereera.
Jeequmsaa fi hokkara uumameenis miseensonni naannolee garaa garaa keessatti argaman mootummaan eegumsa akka isaaniif taasisuuf waltajjiiwwan adda addaatti kaasaa turuusaanii kan eeree, ibisi kun, sadarkaa balaa sirnichaa fi heera mootummaa irratti aggaamame kana itti to'atamuun hindanda'amne irra waan gahameef sirna heera mootummaa eegsisuuf labsii yeroo muddamaa baasuun barbaachisaa ta'uun itti amanameera jedheera.
Waan kana ta'eefuu, haaluma Heera Mootummaa biyyattii keewwata 93 (1) (A) tiin labsiin yeroo muddamaa kun labsameera.
Labsiin kunis har'a ALI Gurraandhala 09/ 2010 guyyaa mana maree Ministirootaatiin itti labsame irraa eegalee hojiirra akka ooluus ibsameera.
Bara darbe keessas, biyyattiin labsii yeroo muddaa baatiiwwan jahaaf labsuun boodarra ammoo, baatii sadiif erga dheereesitteen booda, kaafamuunsaa ni yaadatama.
Kana malees, Ministirri muummichaa biyyattii obbo Haayilamaariyaam Dasaalanyis haala yaachisaa biyyattiin keessatti argamtuuf furmaata barbaachuu keessatti kan gahee kootii gummaachuuf haala jedhuun gaaffii aangoo ministirummaa fi dhaaba isaanii keessatti qaban gadhiisuu kan galfatan guyyaadhuma tokkoon dura ture.